कोरोनाका कारण इलेक्ट्रिकल ई. मोतीलाल मण्डलको मृत्यु - Engineers Post
विराटनगर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अन्दाजी ४६ वर्षीय इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर मोतीलाल मण्डलको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । शुक्रबार राति ४ बजे विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो ।
मोतीलाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना विराटनगरमा कार्यरत थिए । १०/१५ दिन अगाडि सामान्य रुघाखोकी लागेर निको भइसकेको भए पनि केही दिनअघि अचानक श्वासप्रश्वासमा गाह्रो भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको उनका साथी ई. हरिराम पोखरेलले जानकारी दिए । उनले इन्जिनियर्स पोस्टलाई भने, ‘श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि अस्पताल भर्ना गरियो । उपचारकै क्रममा उहाँको निधन भयो ।’
मण्डल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्यसमेत थिए । उनको परिवारमा श्रीमती, एक छोरा र छोरी छन् ।